Fampandrosoana · Aogositra, 2011 · Global Voices teny Malagasy
Fampandrosoana · Aogositra, 2011
Tantara mikasika ny Fampandrosoana tamin'ny Aogositra, 2011
Madagasikara: Sazy Mitondra Mankamin'ny Fitontonganan'ny Toe-karena Sy Tsy Fanjarian-Tsakafo
Afrika Mainty 17 Aogositra 2011
Tato anatin'ny taona vitsy dia niaina fitontonganana misoko mangina ny toe-karen'i Madagasikara, izay efa marefo rahateo, miantraika mafy amin'ny fiainan'ireo vahoaka Malagasy an-tapitrisany izany. Miaraka aminà toe-karena voakilasy ho ratsy indrindra eran-tany sy ny fanjarian-tsakafo misoko mangina, mireaka ny antom-pisiana sy ny fiantraikan'ny sazy iraisam-pirenena ny vahoaka Malagasy.
Azia Atsinanana 14 Aogositra 2011
Afrika Mainty 14 Aogositra 2011
Anio dia ambaranay ny anaran'ireo mpitoraka bilaogy miisa 10 ao amin'ny Global Voices sy ireo "Activista" miisa 11 izay hiara-hiasa amin'ny alalan'ny aterineto mandritry ny volana ho avy rehetra. Izy io dia ampahany amin'ny eritreritra vaovao ho fanoroana hevitra izay novokarin'ny Global Voices sy ny Activista, tambajotran'ny tanora ao amin'ny fikambanana iraisam-pirenena mikatsaka ny fandrosoana, ActionAid.
Maneran-tany: Zarao Amin'izao Tontolo Izao ny Fiainanao Ny 11-11-11
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 12 Aogositra 2011
Inona no hataonao amin'ny 11 Novambra 2011? Zarao amin'izao tontolo izao izany amin'ny alalan'ny 11Eleven Project ary manampia amin'ny fanatontosana ireo Tanjon'ny Firenena Mikambana ho Fampivoarana ny Taonarivo!
Balkana: Ambonin'ny Antsasaky ny Mponina no Mampiasa ny Aterineto
Eoropa Afovoany & Atsinanana 11 Aogositra 2011
Nitatitra momba ireo vokatry ny fandalinana ny fampiasana ny Aterineto any amin'ny faritr'i Balkana i Danica Radovanovic.